Dr. Aung Kyaw
Professor and Head - Dept. of Commerce - Monywa University of Economics
Professor and Head of Department,Dept. of Commerce
ဒေါက်တာအောင်ကျော်သည် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပါရဂူဘွဲ့ရတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် မုံရွာ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ ဝါဏိဇ္ဇ ဗေဒ ဌာန (Department of Commerce) တွင် ပါမောက္ခနှင့် ဌာနမှူး ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့များရှိ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး သင်တန်းကျောင်းများတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲခေါင် ကောလိပ်၏ အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများတွင် နိုင်ငံတော် အကြံပေး အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ မွန်ပြည်နယ် တည်ထောင်စ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်တွင် အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အပြင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများ၏ စီးပွားရေး စီမံကိန်းများ၊ လူ့အစွမ်အား အရင်းအမြစ် စီမံမှုများ နှင့် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု စီမံချက်များတွက်လည်း စီးပွားရေး အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အသေးစား စီးပွားရေး တိုးတက်မှု၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ ဝန်ထမ်းစီမံရေး နှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲရေး ဘာသာရပ်များ နှင့် ပက်သက်၍လည်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အခါအားလျော်စွာ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။